Haddii aad si joogto ah u geliyaan videos inay webka, qaab WebM file video waxay bixisaa riixo si fiican oo tayo video marka la barbar dhigo kale qaabab video. Waxaa sidoo kale taageeray daalacashada waaweyn ee. WebM videos waa arrin caan ah oo ku saabsan goobaha la wadaago video sida YouTube iyo xitaa internetka kale oo gaar ah. Diinta MP4 in WebM noqon karaan kuwo ku adag haddii aadan haysan software saxda ah. Wondershare Video Converter Ultimate Waa codsi boosaska badan kaas oo aad isticmaali karto si loogu badalo ka MP4 in WebM daqiiqado yar gudahood oo aan laga badinin tayada video. Halkan waxaa ah sidii aad u samayn karaa.
Part1: MP4 The Best in WebM Video Converter
Part2: MP4 Free in WebM Video Converter
Part3: MP4 Online in Converter WebM
Part4: Dooro MP4 in WebM Video Converter in adiga kugu habboon
Part5: Aqoonta Extended u WebM iyo MP4 Video qaabab
Converter video Tani waxay leedahay faa'iidooyin badan marka loo eego tartanka. Waxaa ka mid ah:
• Ilaa 3 jeer ka dhakhsi marka la barbar dhigo software tartamaya
• Beddelaan MP4 in qaabab kala duwan oo ay ku jiraan video WebM, AVI iyo MOV
• In la abuuro gaar video saarka iyada oo itusi horena sida falinjeeerka oo ku daray subtitles
• Waxay la shaqeyaan on XP daaqadaha iyo wixii ka sarreeya, iyo Mac OSX
• toos ah Guba si DVD disk marka aad dhameystirtay diinta video
1.2 Habka ee diinta MP4 in WebM isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate
Tallaabada 1 geliyaan MP4 faylasha
Waxaad ku samayn kartaa laba siyaabood. Marka hore, waxaad u soo jiidi kartaa jeedi files ee barnaamijka. Labaad, aad "guji in aad ku darto files" kartaa. Waxa uu kuu furayaa daaqad cusub oo aad dooran kartaa files MP4 aad jeceshahay inaad ku beddelato WebM ah. Marka aad uploaded faylasha aad aad iyaga ku eegaan karo, bedeli magacyadooda ama xataa u midowdo.
Tallaabada 2 Qaabka Output Select (WebM)
Dhinaca midig ee suuqa kala, guji "qaab wax soo saarka" button in la furo daaqad cusub. Riix "qaab" button dooro WebM.
Tallaabada 3 Customize By ayeey (Ikhtiyaar)
Haddii aad rabto in la abuuro a video WebM caadadii, waxaad fursad u haysataa oo ay itusi hor diinta. Goobaha tafatirka ayaa waxaa lagu sameyn karaa ka dib marka aad guji "edit" button gudahood uu furmo suuqa ugu weyn. Qaar ka mid ah itusi waxaad samayn kartaa adigoo isticmaalaya Wondershare Video Converter Ultimate waxaa ka mid ah beerista, falinjeeerka, qoqobada, beddelo nuur iyo duwan iyo sidoo kale ku daray subtitles.
Tallaabada 4 Start Conversion
Marka aad tahay qof ku qanacsanayn tayada video ah, guji "badalo" badhanka si ay u bilaabaan hawlaha qaab beddelidda. Waxay qaadataa dhawr daqiiqo si ay u buuxiyaan oo ku xiran file la badaley. Marka nidaamka dhamaato, waxaad ka arki kartaa file ka badaley adigoo gujinaya "folder furan" badhanka ku yaal xagga hoose ee suuqa kala.
Waxa kale oo aad u bedeli karaan faylasha MP4 si aad u WebM lacag la'aan ah iyadoo la isticmaalayo Wondershare Video Converter Free ah. Software wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si loogu badalo aad video files oo aan waxba bixin kaas oo noqon kara haboon haddii aad kaliya diinta file hal. Intaa waxaa dheer, tani waa software miisaanka in waxa taageeray daaqadaha NT4 ilaa daaqadaha 8. Waxa kale oo ay maamulaan kartaa kumbiyuutarada oo xoog leh processing hoose iyo xusuusta.
Eye-bilig file xawaaraha diinta
Xoog video tafatirka
Secure oo lagu kalsoonaan karo
Tayada diinta Wanaagsan
Awoodda dajinta YouTube
2.2 diinta MP4 in WebM isticmaalaya Wondershare Video Converter Free
Tallaabada 1 Import files MP4 ah
Marka aad ku rakiban oo ay maamulaan software-ka, dajiyaan files MP4 aad by jiiday iyo tagtey gal interface ugu weyn. Waxa kale oo aad soo dhoofsadaan karo files adigoo gujinaya ah "dari files" button. Waxa uu kuu furayaa daaqad cusub oo aad u heshaan karo oo ay doortaan mid ama ka badan MP4 files u Upload.
Tallaabada 2 Dooro wax soo saarka iyo edit
Marka aad dhameystirtay uploading files MP4 aad, guji "qaab" button dooro WebM sida wax soo saarka hawada. Waxa kale oo aad samayn kartaa itusi in aad video hor u beddelaya.
Tallaabada 3 Beddelaan file ka MP4 in WebM
Ka dib markii aad ku qancay in wax soo saarka aad video si fiican loo saxar, guji badhanka diinta ah. Marxaladani waxay qaadan kartaa dhowr daqiiqo oo ay ku dhameeyaan.
MP4 Online in WebM Video Converter
MP4 Free in WebM Video Converter
Best MP4 in WebM Video Converter
Halkan waxaa miis bixinta macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan MP4 iyo WebM ah qaabab video
Description WebM waa qaab file video ah. Its horumarinta ayaa waxaa maalgelisay Google oo loogu tala galay in ay bixiso boqortooyada qaab free video in la ciyaari karo daalacashada internetka.
MP4 waa file weel. Waxay awood u noocyada kala duwan ee multimedia sida video, audio iyo sawirada la kaydiyo gudahood file hal.
Daalacashaduna casriga ah in ay taageeraan HTML5
Markii hore On2, Xiph, iyo Matroska; ka dib Google.
Details for WebM
Hordhac Si WebM File-dhismeedka
Sida loo rogo ama Guba iyo MP4 in DVD
sida loo ciyaaro MP4 on TV
Sida loo Beddelaan mod in MP4 leh tayo sare leh
Top 15 MP4 in DVD gubi inaad barataa
Top 6 Software Baakado Dayactirka MP4 Videos on Mac iyo Windows
> Resource > MP4 > Sida loo Beddelaan MP4 in WebM la Loss Tayada Zero?